Yehluke kakhulu i-avanza entsha - Isolezwe | IOL.co.za
News Business Sport Motoring Tonight Lifestyle Travel SciTech Blogs Newspapers Classifieds Property Jobs Isolezwe Home Izindaba Ezokungcebeleka Ezemidlalo Intandokazi Ezemisakazo Ezezimoto Yehluke kakhulu i-avanza entsha
July 26 2012 at 10:14am By NGQESHE BUTHELEZI
The cast of Modern Family, winner for best television series - comedy or musical, poses with producer Steven Levitan (3rd from L) backstage at the 69th annual Golden Globe Awards in Beverly Hills, California, in this January 15, 2012, file photo. In the comedy arena, "Modern Family," pulled in 14 nominations including best TV comedy again at the Emmy nominations July 19, 2012. REUTERS/Lucy Nicholson/Files (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT)
UMHLAZIYI: NGQESHE BUTHELEZI IMOTO:Toyota Avanza MKHULU umehluko phakathi kwe-Avanza eyethulwa okokuqala ngo 2006 kuleli nalena entsha yakwa Toyota. Izinhlobo ze Toyota Avanza ezisanda kwethulwa zihlukene ngezigaba ezinhlanu kodwa izinjini zazo zona zihlukene kabili, kukhona engu 1.3 litre nengu 1.5 litre. Ezinyangeni ezedlule kuyo le ngosi sike sakuthatha sakubeka nge Avanza 1.3 litre SX ebiza R168 600 njengoba emuva kwesikhathi siphinde sathola elinye ithuba lokuvivinya lena esesigabeni esiphezulu i-Avanza SX ebiza R168 800 ngofefe labakwa Toyota South Africa. Zikhona izinto ezingashintshile njengokuthi nalena entsha isaphuma nazo izihlalo eziyisikhombisa. KwaToyota bathi kule Avanza abaziqhayisi nje kuphela ngokwethembeka kwayo kodwa badlise nangesitayela, ukuvuleka ngaphakathi nobuntofontofo. IZINTO ABAZISHINTSHILE Indlela eyakhiwe ngayo ngaphandle nangaphakathi bayishintshile, balithuthukisile izinga. Noma ngingeke ngaphawula kakhulu ngobuntofontofo ababushoyo kulena entsha ngoba lena endala akuhlukile nokuthi uhleli esigqikini uma uhamba ngayo. KwaToyota bathi bazandisile izindawo zokubeka impahla namakhosombe kwi-Avanza entsha. Ngakwezokuphepha bathi balinyusile izinga, kanti lena entsha isiyawonga upetrol futhi nasemgwaqeni iyabambelela. Ngokusho kwabakwa Toyota le Avanza eyi-second generation MPV ayinayo imbangi ngqo kulesi sigaba sezimoto. Ihlukene ngezinhlobo ezintathu kukhona eyi S esesigabeni esiphansi, ilandelwe yi SX ephakathi nendawo bese kuvala i- TX. Uma uyibhekisisa kahle ngaphambili uzobona ukuthi bayishintshile njengoba besebenzise yona ukuveza ubuso obusha bezimoto zabo. Kuzo zonke izinhlobo igrille igqize ngombala ofanayo nomzimba wemoto ngaphandle kwe TX egqize nge chrome yase iphuma namalambu enkungu. Abagcinanga lapho iphinde yagqiza nge-chrome ende ngaphezulu kwe-number plate ne-spoiler osibona kalula uza le kude ngoba sithe chwa phezulu esicabheni sangemuva. AMANDLA NEZINJINI Kukhona izinhlobo ezimbili zezinjini okuyi 1.3 litre ne 1.5 litre ezisebenzisa upetrol. Noma lungekho ushintsho olutheni ezinjinini uma kuqhathaniswa ne- Avanza endala kodwa isisindo sale moto basehlisile ngo 20kg. Azidli kakhulu ku-petrol ngoba injini engu 1.3 litre isebenzisa amalitha angu 7,7 ngo 100km, besekuthi i-1.5 automatic isebenzise angu 7,6 ngo 100km, kanti eshintshwayo idla upetrol ongu 7,2 wamalitha ngo 100km. Injini engu 1.5 litre ikhiqiza amandla angu 76kW kanye ne torque engu 136Nm bese kuthi lena engu 1.3 litre ibe namandla angu 67kw kanye ne torque engu 117Nm. Lena esesigabeni esiphezulu iphuma nesiteringi sakhona esiyi Hydraulic Power Steering basishintshile bafaka i-Electric Power Steering (EPS) Kwezokuphepha zonke izinhlobo ziphuma ne ABS (Anti-lock Brake System) with EBD (Electronic Brake force Distribution). Ngaphezu kwalokho kunama airbag ngaphambili nasezinhlangothini. AMANANI Avanza 1.3 S – R155 900 Avanza 1.3 SX – R168 800 Avanza 1.5 SX – R175 500 Avanza 1.5 SX AT – R189 600 Avanza 1.5 TX – R202 200 Amanani ahambisana neService Plan yeminyaka emine emuva kuka 60 000 km Toyota Care Service Plan, ne-warranty yeminyaka emithathu emuva kuka 100 000km. Comment Guidelines
IOL / Isolezwe / Yehluke kakhulu i-avanza entsha We like to make your life easier